मसँग पार्टी सञ्चालनकाे स्पष्ट कार्यदिशा छः अर्जुन नरसिंह केसी — OnlineDabali
मसँग पार्टी सञ्चालनकाे स्पष्ट कार्यदिशा छः अर्जुन नरसिंह केसी
Posted on March 6, 2016 by अनलाइन डबली
नेपाली कांग्रेसमा नेता अर्जुन नरसिंह केसी एकजना प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । विक्रम संम्बत २००४ सालमा राउतबेसी नुवाकोटमा जन्मिएका केसी २०४८ सालमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । कानुन संकायबाट स्नातकोत्तर गरेका केसी २०५२ सालमा १८ महिना स्वास्थ्य मन्त्री, २०५४ सालमा शिक्षा तथा आवस मन्त्री र २०५७ सालदेखि ०६२ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता थिए भने २०६४ सालदेखि ०६८ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री भएका थिए । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओबादी उमेदवार बिमला सुवेदीसंग पराजित भएका केसी २०७० सालमा दोश्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।
पार्टीको १० औँ अधिवेशनमा ९ औँ पोजिसन ल्याएर जितेका केसीले ११ आैँ अधिवेशनमा पाँचौ, हुँदै यसअघि भएको १२ औँ अधिवेशनमा दोश्रो पोजिसन ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा जितेका थिए ।
प्रस्तुत छ अनलाइ डबलीको लागि पत्रकार नवराज कुँवरले कुराकानीको अंश ।
तपाईँलाई प्रतिनिधिहरुले किन केन्द्रीय सदस्यमा जिताउने ?
म पदको लागिमात्रै मैदानमा उत्रिएको हैन । म नेपाली कांग्रेसलाई जनताको एउटा विश्वासीलो पार्टी बनाउने अभियानस्वरुप मैदानमा आएको छ । मैले यसअघि विभिन्न जिल्लाका सभापति साथीहरुसंग पनि कुराकानी गरेँ । उहाँहरुले मलाई अगाडि बढ्नुस् भन्ने सुझावहरु पनि दिनुभयो ।
पार्टीभित्र देखिएको ध्रविकरणको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर पार्टीसंगै राष्ट्रलाई पनि समृद्धिको बाटोमा लैजाने विशेष पहल मबाट हुनेछ । युवा साथीहरुले पार्टीबारे सधै चिन्ता र गुनासो गर्नुहुन्छ । यो पनि बडो चिन्तनीय विषय छ । त्यसैले युवाहरुले चाहेजसरी पार्टीलाई एउटा त्यस्तो बाटोमा लैजानुपर्छ जुन बाटोमार्फत पार्टीसंगै राष्ट्र समृद्धि गतिमा दौडिन सकोस् ।
नयाँ कुराहरुभन्दा पुराना कुराहरु नै लागु गर्न जरुरी ठान्छु म । किन भने पुराना प्रतिवद्धता र लक्ष्यहरु नै पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ कुरा गर्छु भन्नु ब्यर्थ हुन्छ । मेरो मतलव यो पनि हैन कि नयाँ एजेण्डालाई वेवास्ता गर्नु । आवश्यकता भएको पूराना कुराहरुलाई पनि नछाड्ने र नयाँ कुराहरुलाई व्यवहारतः लागु गर्ने ममा एउटा उर्जा छ । मैले महामन्त्रीमा जितेभने कांग्रेस पार्टीलाई जनताले अपनत्व महशुस गर्न सक्ने पार्टी बनाउँछु भन्ने नै मेरो मुख्य लक्ष्य पनि हो ।
समावेशीताका कुराहरु छन्, देशमा युवा बेरोजगारी बढेका कुराहरु छन् । यस्ता समस्या हल गर्नका लागि मलाई कार्यकर्ता र प्रतिनिधि साथीहरुले विश्वास गर्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तपाई त संस्थापन पक्षको नेताका रुपमा चिनिनुहुन्थ्यो, तर देउवा पक्षबाट महामन्त्री किन लड्नुभयो ?
यसअघि मैले भाग लिएका प्रत्येक निर्वाचनमा मैले राम्रो पोजिसन ल्याएर जितेको थिएँ । जनताले विश्वास गरेको मान्छे हुँ म पनि । २०५४ सालपछि अहिले ७२ सालमासम्मको यो १८ वर्षमा पार्टी सरकारमा गएका बेला म मन्त्री बनेको छैन । यहाँ एकथरि पक्षलाई जन्मजात मन्त्री र सरकारमा बस्नुपर्ने ढंगबाट उहाँहरु (संस्थापन)ले लिनुभयो । यो न्याय र विवेवको दृष्टिकोणले राम्रो भएन । मैले धेरै विचार गरेँ । राष्ट्रिय रुपबाट पनि लोकतान्त्रीक पक्षधरहरुलाई समेटेर लैजान सक्ने नेतृत्वको क्षमता राख्ने मैले देउवाजीलाई नै देखेँ । त्यसैले मैले उहाँलाई रोजेको हुँ ।
तर तपाई र तपाईको ज्वाई गगन थापा एउटै पदमा भिन्दाभिन्दै प्यानल बनाएर मैदानमा उत्रिनुभो नि ?
गगन युवा नेतामात्र नभएर मेरो परिवारभित्रको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टी एउटै हो । लोकतन्त्रमा प्रतिष्पर्धा स्वभाविक पनि हो । एक भएर अघि बढ्न मैले उहाँसंग छलफल पनि गरेँ । तर उहाँले प्रतिष्पर्धा गर्न चाहानुभयो मैले त्यसलाई अस्वभाविक ठानिन ।
तपाईले जित्नेमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ?
म विस्वस्त छु । मलाई यो पटक महामन्त्रीमा विजयी गराई पार्टीलाई समृद्धिको बाटो तर्फ लगेको हेर्न धेरैले चाहानुभएको छ त्यो म पूरा गर्नेछु ।
तपाई संस्थापनबाट देउवापटि आउनुभाको छ, संस्थापनबाटै पनि दुइजना उमेदवार छन्, भोट काटिएर तपाईलाई असर पर्ने हो कि ?
त्यस्तो हुँदैन । साथीहरुले पार्टीप्रति मेरो लगाव र परिश्रम त हेर्नुहुन्छ नै पार्टीलाई एउटा मिसनका साथ अघि बढाउने मेरो भिजनलाई विश्वास गर्नुभएको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
विपिको कामलाई मान्यता प्रदान गराएकोले काँग्रेस नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा: शेर्पा